Qalab shilalka 'ka yareeya' baabuurta oo laga hirgalinayo Yurub - BBC News Somali
Qalab shilalka 'ka yareeya' baabuurta oo laga hirgalinayo Yurub
Qalabka cusub ee xakamaynta xawliga ayaa lagu qasbi doonaa in lagu rakibo baabuurta la iibinayo gudaha Yurub wixii ka danbeeya sannadka 2020,kadib marka ay Midowga Yurub isku raacaan dhaqan galinta hindisahan.
Xubnaha u ololaynaya sharcigana ayaa la aamanay, iyada oo talaabadan ay badbaadin doonta nolosaha kumannaan ruux.sida warbixinta lagu sheegay.
Wasaaradda ruqsada baabuurta ee UK ayaa horay u sheegtay in UK ay la jaan qaadi doonto heerarka gaadiidka Midowga Yurub ka dib kabixista midowga Yurub ee Brexit.
Talabooyinka badbaadada ee ay ansixiyeen waxaa ka mid ahaa isticmaalka qalabka caawiyaha xawliga ee loo yaqaano (ISA) iyo qalabka caawiyaha istaajiyaha,qalabkan ayaa la shaqeynaya GPS (Jiheeyaha) si ay u fududaato la socoshada gaadiidku xawliga ay ku socdaan, goobta ay marayaan iyo in hadii loo baahdo uu istaajinkaro.
Hargaysa: Shabakad baabuurta xadda oo gacanta lagu dhigay
Midowga Yurub ayaa sheegay in qorshahan uu caawin doono in laga badbaado dhaawacyada halista ee ay daliyaan shilalku tiro gaaraysa ilaa 140,000,ujeedka ugu danbeeya ayaa la filayaa in la gaarsiiyo dhimashada shilalka meesha ugu hoosaysa marka la gaaro sannadka 20150.
Haweenayda lagu magaaco Elzbieta Bienkowska ayaa tiri ''sannad walba 25,000 oo ruux ayaa naftooda ku waaya shilalka waddooyinka,sababta ugu badan ee shilalkan dhaliya ayaa ah qalad ay sameeyaan dadku''.
In hore loogu sii socdo waxaa soo dhaweeyey Ururka badbaadada gaadiidka Yurub,ansixinta ayaa qaadan doonta dhowr bilood inta ay ansanixayaan baarlamanka Yurub.